Hoyga Wararka Marar | Ururka Marar oo M/Jinacsani dad agoon iyo masaakiin iskugu jira raashiin afurin ah ugu qaybiyay
Posted on June 16, 2016 by mararnews
Ururka Marar oo M/Jinacsani dad agoon iyo masaakiin iskugu jira raashiin afurin ah ugu qaybiyay
Agoon iyo dad masaakiin ah oo deeq la gaadhsiiyay.
Ururka Marar Foundation ayaa 96 qoysas iskugu jira agoon iyo kuwa danyara oo masaakiin ah ugu qaybisay raashin afurin ah magaalada Jinacsani.
Qaar ka mid ah qoysaskii raashinka afurinta ah loo qeybiyay ee ku dhaqan degmada Jinacsani ayaa ka mahad celiyay raashinka ay uu qaybisay Hay’ada Marar Foundation, iyagoo xusay inay ku soo aaday xilli ay u baahnaayeen wayna u Mahad celiyeen ururka iyo walaalihii sadaqada lasoo baxay.
Mas’uuliyiinta degmada Jinacsani, Culumada magaalada Jinacsani, Shacabka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada jinacsani ayaa sheegay inay tahay mid ay soo dhaweynayaan oo ku dayasho iyo garab istaag mudan, iyagoo jaaliyadaha u dhashay degmada Jinacsani iyo deegaanka qaybihiisa kale duwan ka dalbaday in ay garab istaagaan ururka Marar Foundation si ay kaalmo sidaan oo kale ah ugu fidiyaan qoysaska danyar ta ah ee ku sugan guud ahaan deegaanka.
Dhanka kale Ururka Marar Foundation ayaa horay ugu balan qaaday inta lagu guda jiro bisha Barakaysan ee Ramadaan in raashin afurin ah gaadhsiin doonto dadka danyarta ah ee ku sugan Jinacsani iyagoo intaa raaciyay sanadka danbe in ay gaadhsiin doonaan deegaanka intiisa kale.
Dhamaan deegaanka waxaa ku dhaqan kumanaan qoys ah oo aan waxba haysan,
One comment on “Ururka Marar oo M/Jinacsani dad agoon iyo masaakiin iskugu jira raashiin afurin ah ugu qaybiyay”
Ayan Abdi Ali Kulubi
Masha Allah ❤️❤️❤️❤️I’m so proud of my people!!!!!!!